တစ်ဦး Sari ထုပ်ဖို့ကိုဘယ်လိုအပေါ်သင်ခန်းစာ
ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး ဝိဇ္ဇာ & ယဉ်ကျေးမှု
တစ်ဦးက Sari (တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦး saree ခေါ်) အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးသမီးများဝတ်ဆင်တဲ့အစဉ်အလာအထည်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရစ်ပတ်နှစ်ယောက်ကအခြားသောအဝတ်နှင့်အတူဝတ်ဆင်ကြောင်းအစဉ်အလာအရှည်ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ပိုးအကြောင်းကို5မှ 8 မီတာကိုဖန်ဆင်းသောအထည်ကိုတစ်စတုဂံအပိုင်းအစ, သည်:
တစ်ဦးက petticoat ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွဘောင်းဘီကဲ့သို့ drawstring အားဖြင့်ခါးမှာတင်းတင်းချည်ထားတဲ့ခါး-to-ကြမ်းပြင်အောကျခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ petticoat တတ်နိုင်သမျှအနီးကပ်အခြေစိုက်စခန်း Sari အရောင်ကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ petticoat ၏အဘယ်သူမျှမအစိတ်အပိုင်း Sari အပြင်ဘက်မြင်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
တစ်ဦးကအင်္ကျီ necklines အမျိုးမျိုးနှင့်အတူတိုတောင်းသောလက်သို့မဟုတ် sleeveless နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်္ကျီရုံတွေဆီကနေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆုံးသတ်နှင့်တင်းကျပ်စွာ-လျောက်ပတ်ဖြစ်သင့်သည်။
Saris အဘိဓါန်တခါတရံမြိတ်သို့မဟုတ်ပီပီပုံစံများနှင့်အတူနယ်စပ်တလျှောက်တွင်တန်ဆာဆင်သောအရောင်အဆင်း၏အကွာအဝေးအတွင်းထံသို့လာကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောမင်္ဂလာဆောင်အဖြစ်အထူးအခါသမယများအတွက်ဝတ်ဆင် Saris အဘိဓါန်, ကိုလည်းရက်ကိုရွှေသို့မဟုတ်ငွေအပန်းတွေနဲ့အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒီလမ်းညွှန်တစ်ဦး Sari ဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Petticoat သငျ့
အဆိုပါခါး၏ညာဘက်တစ်နည်းနည်းသောအနေအထားမှာ, petticoat သို့၎င်း၏အထက်အဆုံး tucking အားဖြင့် Sari ဝတ်ထားစတင်ပါ။ အဆိုပါ Sari ၏အောက်ပိုင်းအဆုံးကြမ်းပြင်ကိုထိလျက်, Sari တစ်ခုလုံးအရှည်လက်ဝဲဘက်မှာလာသင့်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းအပေါ်ရှေ့တွင်အဆုံးသတ်တစ်ချိန်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပတ်လည် Sari ခြုံ။
အဆိုပါ Pleats စုဝေးစေ
အဆိုပါတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်-in ကိုအဆုံးမှာစတင်ခန့်5လက်မရှည်လျားအကြောင်းကိုငါးမှခုနစ် pleats စီလုပ်ပါ။ အဆိုပါ pleats ၏အောက်ပိုင်းအစွန်းပင်များနှင့်ဖွင့်မြေပြင်ကိုချွတ်ကြောင်းကိုသေချာ, အတူတကွ pleats စုဝေးစေ။ အဆိုပါ pleats ဖြောင့်ခြင်းနှင့်အညီအမျှကျကြသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဘေးကင်းလုံခြုံမှု pin ကိုကြဲထံမှ pleats ကိုရပ်တန့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Tuck အဆိုပါ Pleats
သေသပ်စွာသူတို့သည်သင်၏လက်ဝဲဘက်မှဖွင့်လှစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌, အနည်းငယ်ခါး၏, လက်ဝဲ, ခါးမှာ petticoat သို့ pleats tuck ။
တစ်ချိန်ကပိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဝန်းကျင်ကျန်ရှိထည် Drape, လက်ျာဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အဆိုပါ Sari ၏ထိပ်အစွန်းကိုင်ပြီး, ရှေ့ရန်သင့်တင်ပါးတဝိုက်ကယူလာပါ။
အနည်းငယ်ကြောင့်၏အဆုံးသင့်ရဲ့ဒူးထောကျ၏အဆငျ့အကြောင်းကိုမှကျရောက်နိုင်အောင်လက်ျာလက်ရုံးတော်အောက်, လက်ဝဲပခုံးကိုကျော်တက်ဆောင်ခဲ့သည်သင်၏နောက်ကျောအပေါ် Sari ၏ကျန်ရှိသောအဘို့ကိုမြှင့်။
လက်ဝဲပခုံးကနေ draped အဆုံးအဘို့ကို၎င်း pallav သို့မဟုတ်ဖာလုဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာအသေးဘေးကင်းလုံခြုံမှု pin ကိုအတူအင်္ကျီဖို့ပခုံးမှာ fastening နေဖြင့်ချော်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦး Sari ဝတ်ဆင်၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ
အိန္ဒိယ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတစ် Sari draping ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားပုံစံများရှိသည်။ ဤရွေ့ကား Sari စတိုင်အသုံးအများဆုံးဒေသဆိုင်ရာမူကွဲအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ဂူဂြာရ: အများအားအဆိုပါ seedha ဖာလုလမ်းအဖြစ်လူသိများ draping ဒီဗားရှင်းကိုလည်း Uttar Pradesh ပြည်နယ်, Madhya Pradesh, Rajasthan နှင့် Bihar ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတွေ့ရပါသည်။ အဲဒီအစားလက်ဝဲမှအဖွင့်တို့သည်လက်ျာဘက်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်, အ pleats တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်နေကြသည်။ ထိုအခါဖာလုကျောခေါ်ဆောင်သွားနှင့်လက်ျာပခုံးကိုကျော်ယူဆောင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်ဘတ်အနှံ့ပြန့်နှံ့နေသည်နှင့်ဘယ်ဘက်အစွန်းနောက်ကျောမှာ petticoat အတွက်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မဟာရပ်ရှ: မယ့်အစားပုံမှန်အတိုင်း5မီတာ, ဒီဗားရှင်းအတွက် Sari 8 မီတာတိုင်းတာသည်။ အခြားသောအဘို့ကိုရငျခှငျကျော်တစ်ဦးနုအဖြစ် draped ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် Sari တစ်ခုမှာဆက်ဆံခါးမှာနောက်ကွယ်ကအတွင်းခြေထောက်နှင့်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်အကြားရေးဆွဲနေပါတယ်။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခွင့်ပြု, မတူတဲ့ Sari တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပေါ်လာသော။
Tamilian: အအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ်ဗားရှင်းလိုပဲ, ဒီ Sari 8 မီတာရှည်လျားသည်။ ခါးပတ်လည်မှာအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကပြီးနောက်, pleats လက်ဝဲခြေထောက်တစ်လျှောက်တွင်နေရာယူထားကြသည်။ အဆိုပါ Sari ၏ကျန်, လက်ဝဲပခုံးလွှဲပြောင်းယူခါးပတ်ပတ်လည်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပတ်ရစ်နှင့်လက်ဝဲဘက်အပေါ်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီ : အဆိုပါ Sari အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ pleatless ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ျာဘက်၌ပြန်လည်ယူဆောင်ဖြစ်လျှင်, ခါးပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်း, ဖာလုလက်ဝဲပခုံးကိုကျော်ချပစ်သည်။ အဆိုပါဖာလုထို့နောက်ညာဘက်လက်မောင်းအောက်မှဆောင်ခဲ့နှင့်တစ်ဖန်လက်ဝဲပခုံးကိုကျော်ချပစ်သည်။
M ကအတူကစပြီး Sanskrit စကား
ဟိန္ဒူဘာသာအတွက်အချိန် Concept က
သန့်ရှင်းသောဘုရားနွားတွေ: ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အမင်္ဂလာရှိ၏ bovine
ဟိန္ဒူပွဲတော်များ, Fast နှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့၏ 2017 ပြက္ခဒိန်
အဆိုပါ Ganesh Chaturthi
'' လုလင်ပျို -! ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏အိုး '' - ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါရီးရဲလ်အဓိပ်ပာယျနဲ့ 'namaste' '၏သိသာထင်ရှားသော
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အ Teej, ဟိန္ဒူစာရှောင်ခြင်းပွဲတော်များမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
တစ်ဦး Glass ကိုသိပ္ပံကို Magic Tricks အတွက်ပွဲစဉ်များနှင့်ရေ
'' သင်ကမင်္ဂလာနေနှင့် အကယ်. သင်သိလျှင် '' Chord
ပုဂံ Craft စီမံကိန်းများ
Joule ကူးပြောင်းခြင်းဥပမာပြဿနာမှအီလက်ထရွန် Volt
'' Nada '' အသုံးပြုခြင်း
အမေရိကန် Liberty Elm
သည် Stony Brook တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
မာတိကာတစ်စားပွဲတင်အတွက် Dots Up ကိုတန်းစီ
Claremont McKenna GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အလှကုန်များတွင် Phthalate အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသလား
ဗိုင်းရပ်စ်သတိပေးချက် "Drano ဗုံး" အန္တရာယ်၏သတိပေး
ListView နှင့် ComboBox ဥပမာ Code ကို
Qesem ဂူ (အစ္စရေး)
Theism ကဘာလဲ? Theists အဘယ်သူနည်း ဘုရားသခင်နှင့်ဘုရားကိုယုံကြည်
ကျွမ်းဘားလေ့အကျင့်: အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့အားကစားရုံအိတ်အတွက် Pack မှ
CUE (ဆိုနိုင်ပါတယ်, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အလေးပေးသော)
အကြီးမြတ်ဆုံးဘုံအချက်များ Find လုပ်နည်း